रबि वड सुदूरपश्चिमबाट नेपाल आइडलमा एक्ला प्रतिस्पर्धी, उपाधि जित्ने दाउमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
रबि वड सुदूरपश्चिमबाट नेपाल आइडलमा एक्ला प्रतिस्पर्धी, उपाधि जित्ने दाउमा !
काठमाडौं, भदौ २५ । केही महिनादेखि नेपालको एक ठूलो ‘गायन रियालीट शो’ नेपाल आइडल सिजन-२ प्रशारण भइरहेको छ । सिजन-२ मा पनि थुप्रै मिहिनेती प्रतिस्पर्धी छन् । उनीहरुबीच अहिले प्रतिस्पर्धाको रौनक झन बढेको छ । कठिन प्रतिस्पर्धाबीच मैदानमा छन्,- प्रदेश सातबाट मिठो आवाज भएका रबि वड ।
हालको प्रदेश सात (साविक सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र) बाट पनि आइडलको उपाधि जित्ने सम्भावना भएका थुप्रै प्रतिस्पर्धी थिए । तर, उपाधिका जित्ने दौडमा रहेका सम्भावित प्रतिस्पर्धी आउट भएका छन् । एद्यपि रबि भने अहिलेसम्म घर फिर्ता हुनबाट जोगिएका छन् ।
रबिले सांगीतक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रेरणाबारे भने, ‘हजुरबुबा गीत गाउनुहुन्थ्यो विशेष गरि म यो क्षेत्रमा आउन उहाँबाट नै प्रभावित भए।’ रबिको घर कञ्चनपुर हो । अहिले उनी २० वर्षका भए । रबिका बुवा भारतमा वाचम्यानको काम गर्ने गर्दछन् । आमाको भने केही वर्षअघि घाँटीको समस्याले निधन भइसकेको छ । रबिले आइ परे जस्तोसुकै गीतलाई पनि न्याय दिन सक्छन् । उनले मध्य तथा सुदूरपश्चिममा गाइने ठाडी भाका पनि मिठो लयमा गाउन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस कञ्चनपुरका रवि नेपाल आइडलको ‘उत्कृट-१२’मा, उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा !
यस्तै, लोकदोहोरी, पप, हिन्दी गीत त उनले सजिलै गाउन सक्छन् । विशेष गरि उनले शिव परियार, सुगम पोख्रेल र हेमन्त रानाका गीतहरु गुन गुनाउँछन् । रबिले ‘थिएटर राउण्ड’ पूरा गरिसकेका छन् । उनी अहिले ‘उत्कृष्ट २०’ भित्र पर्न सफल भएका छन् ।
रबिले धनगढी अडिसनबाट भाग लिएका हुन् । उलने पहिलो चरणमा कमल खत्रीको ‘अब जाउँला रेलैमा, माया तिम्रो साथैमा’ बोलको गीत गाएर ‘गोल्डेन टिकट’ पाएका थिए । त्यसपछि उनले ग्रुपमा ‘पार्यो भुतुक्कै’ र थिएटर राउण्ड पूरा गर्दा सुगम पोखरेलको ‘झिल्केले जाल बुन्यो’ बोलको गीतले साथ दियो ।
उनको उनको यात्रा झन कठिन बनेको छ । आगामी यात्रा उनले बढि मिहिनेत गर्न जरुरी छ । किनकी अब कोहीभन्दा कम प्रतिस्पर्धी छैनन् । प्रदेश सातका एक मात्रै प्रतिस्पर्धी भएकाले अब उनमा हौसला भर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सम्पूर्णले उनलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । त्यो सहयोग अहिलेलाई माया र साथ हो ।
विशेष गरि उनले प्रदेश सातबाट प्रतिधित्व गरेकाले उनलाई यहाँका नागरिकले बढ्दा साथ र माया दिन आवश्यक छ । अब हेर्दै जाउ रबिको नेपाल आइडल यात्रा कहाँसम्म पुग्छ । आशा गरौं उनले नै आइडलको उपाधि जित्न सफल हुन् । रबिलाई हाम्रो धेरै शुभकामना !
ट्याग्स: Nepal idol-2, Ravi odd, नेपाल आइडल सिजन-२